नेपाली हिरोइनहरू किन डिभोर्स रोज्छन् ? - Dainik Nepal
नेपाली हिरोइनहरू किन डिभोर्स रोज्छन् ?
दैनिक नेपाल २०७६ साउन १ गते ११:०९
काठमाडौं । ‘डिभोर्स’ सहर र समाजमा प्रायः भइरहेका हुन्छन् । आम साधारण परिवारदेखि उच्च घरानीयामा पनि यो प्रक्रियागत हिसाबले कहिँ न कहिँ भइरहे पनि केहीले चर्चा पाउने गरेका छन् ।
खासगरी मनोरञ्जन क्षेत्रमा नाम कमाएकाको नीजि र पारिवारिक विषय र त्यसमा पनि डिभोर्सले व्यापक चर्चा पाउने गर्छ ।
हालै मात्र निर्माता छविराज ओझाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गरेकी उनकी पत्नी शिल्पा पोखरेलले डिभोर्सका लागि प्रक्रिया थालिसकेको बताएकी छन् ।
मिडियामा खुलेर आएकी उनले आफूले निक्कै यातना पाएको भन्दै डिभोर्सको तयारी गरेको बताइन् उता ओझाले भने आफूले त्यस्तो यातना नदिएको प्रष्टीकरण दिइरहेका छन् ।
यो घटनाक्रम एकातिर भए पनि नेपाली हिरोइनहरूले डिभोर्स रोजेका कयन उदाहरण छन् । साधारण झगडा परेका कारण ओझासँगै यसअघि अभिनेत्री रेखा थापाले डिभोर्स गरेकी थिइन् । उनी एक्लै बस्छिन्, उनको अर्को बिहेको चर्चाले बेलामौका मिडिया गरमाउने गरेका छन् ।
अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले पनि अमेरिकामा रहेका पूर्वपति रोचक मैनालीसँग डिभोर्स गरेकी थिइन् । उनको बिहेको तयारी भएको बताइएको छ । अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीसँग उनले ‘इन्गेजमेन्ट’ गरिसकेकी छन् ।
बिहे गरेको केही महिनापछि अभिनेत्री रिमा विश्वकर्मा एक्लै बस्न थालिन् । उनले पनि पतिसँग डिभोर्स गरेकी छन् । रिमा हाल रियालिटी शोदेखि विभिन्न कार्यक्रममा अभ्यस्त छिन् ।
कतिपय हिरोइनहरूले डिभोर्सपछि आफ्नो अर्को दाम्पत्य जीवन पनि बिताइरहेका छन् । यस मध्यमा पर्छिन्, पूजा चन्द ।
यस्तै अभिनेत्री संचिता लुइँटेलले पहिलो पतिसँगको डिभोर्सपछि अभिनेता निखिल उप्रेतीसँग बिहे गरिन् । अहिले उनको दाम्पत्य जीवन बलियो र सुखमय रहेको छ ।
यी बाहेक धेरै नेपाली अभिनेत्रीले पारपाचुके र त्यसपछिका जीवन फरक ढंगले बिताइरहेका छन् । तर, अचानक डिभोर्स किन हुन्छ ?
फिल्मसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार फिल्म अभिनयका क्रममा प्रेम सम्बन्धमा पर्ने र त्यो परिपक्व नभई नै बिहे गर्ने प्रचलन छ । पछि बुझ्ने भएपछि उनीहरू स्वतन्त्र हुन खोज्छन् ।
कतिपयले व्यापारीसँग बिहे गर्ने र त्यसको केही समयपछि डिभोर्स गर्दै आएका छन् । महिलावादी अभियानकर्मीहरूका अनुसार अभिनेत्रीले बिहेपछि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाउने वा अड्चन हुने गरेका कारणले डिभोर्सको बाटो रोजेका हुन सक्छन् । तर, उनीहरूका पूर्वपति र तिनका नातेदारले भने बिहे गरी एउटा उचाईमा पुग्ने र त्यसपछि छाड्ने ‘नियतबस’ हुने गरेको बताउँदै आएका छन् ।
नेपालमा मात्र नभएर बलिउड र हलिउडमा पनि हिरोइनहरूले यो प्रक्रियालाई जारी राखेका हुन्छन् । र, कतिपय भने जानाजान दोस्रो वा तेस्रो पत्नीका रूपमा पनि बिहे गरिरहेका घटना र विवरण बाहिर आउँछन् । मनोरञ्जनसम्बन्धी जानकार एक विश्लेषक भन्छन्,‘यस्तो घटनालाई पारिवारिक र सामाजिक परिवेशमा राखेर हेर्नु उचित हुन्छ । यो नितान्त व्यक्तिगत कुरा हुन् तर सेलिब्रिटी भएका कारणले दुनियाँसामु पुग्ने गर्छन् ।’